Bethela ifolda yakho yasekhaya ku-Ubuntu 18.04 LTS | Kusuka kuLinux
Isikhathi esithile Ubuntu usinikeze inketho ngenkathi yenqubo yokufaka ukubethela ifolda yethu yomuntu siqu, abaningi bethu abamane bakushaye indiva. Le nketho isilinganiso sokuphephad ukuze abantu bangaphandle bakwazi ukufinyelela kufolda yethu yomuntu siqu.
Kwi-Linux sinezinye izindlela eziningi phakathi kwayo i-GPG kumafayela, i-eCryptfs noma i-EncFS kuzinkomba, i-TrueCrypt noma i-dm-crypt kumadivayisi, i-loop-AES yamafayela we-loop, phakathi kwabanye. Kungakho kulesi sifundo sizosebenzisa ama-eCryptfs ukubethela ifolda yethu yomuntu siqu.
I-ECryptfs iyithuluzi elisivumela ukuthi sibethele izinhlelo zamafayela ngaphansi kwezinhlelo ze-Linux, I-eCryptfs igcina imethadatha ye-cryptographic kunhlokweni wefayela ngalinye elibhaliwe, ukuze amafayela abetheliwe angakopishwa phakathi kwabasingathi.
Ifayela lizosuswa ngemfihlo ngokhiye ofanele okhiye we-Linux kernel. Ama-ECryptfs asetshenziswa kabanzi, njengesisekelo se-Directory Encrypted Home Directory ka-Ubuntu, futhi azalelwa naku-ChromeOS.
1 Ungayifaka kanjani i-eCryptfs ku-Ubuntu 18.04 nakwezokuphuma?
2 Ungayibhala kanjani ifolda yomuntu siqu ku-Ubuntu 18.04?
3 Ngabe ifolda yomsebenzisi omusha ingabethelwa?
Ungayifaka kanjani i-eCryptfs ku-Ubuntu 18.04 nakwezokuphuma?
Ukuze sibethele ifolda yethu ngemfihlo, kumele sifake ezinye izinsiza, singabathola esikhungweni sesoftware Ubuntu noma ngosizo lweSynaptic okufanele siyibheke nje:
Noma futhi singasebenzisa i-terminal ukuyifaka kukhompyutha yethu, kufanele nje sivule ukuphela bese sisebenzisa umyalo olandelayo.
Ungayibhala kanjani ifolda yomuntu siqu ku-Ubuntu 18.04?
ManjeKubalulekile ukwazi ukuthi ngeke sikwazi ukubethela ifolda yomuntu siqu yomsebenzisi wethu oyisebenzisayo, kungenxa yalokho kumele sizisekele ngokwakha omunye umsebenzisi ohlelweni ukwenza lo msebenzi futhi uwunikeze izimvume zomlawuli.
Lokhu kungaba kwesikhashana, ngakho-ke ungakususa ngokuhamba kwesikhathi. Ukwakha umsebenzisi omusha onamalungelo okuphatha, ungasebenzisa:
Kusuka kuzilungiselelo> Imininingwane> Abasebenzisi:
O kusuka kulayini womyalo:
Manje kufanele sifuduse ifolda yasekhaya yomsebenzisi ukuze siyibethele.
Kufanele bakhumbule nange-intuition elula ukuvala isikhathi ku-akhawunti yethu yomsebenzisi bese bangena nge-akhawunti esanda kudalwa ukuze bakwazi ukubhala ngemfihlo ifolda yethu siqu.
Kwenziwe lokhu kufanele sivule ukuphela bese senza lo myalo ukuhambisa ifolda yasekhaya esiyifunayo:
Lapho usebenzisa lo myalo, ikhophi eyisipele yefolda yasekhaya yomsebenzisi oyifunayo iyakhiwa. Le nqubo ingathatha isikhashana ngakho kufanele ubekezele.
Lapho inqubo isiqedile, phuma ohlelweni bese ungena ngemvume usebenzisa imininingwane evamile yomsebenzisi.
Cishe ukuqeda iphasiwedi idinga ukungezwa ekubetheni, ngalokhu kufanele sivule ukuphela bese senza umyalo olandelayo:
Lapho le nqubo isiqediwe, kufanele siqale kabusha ikhompyutha yethu ukuze siqale ukujabulela ukuba nemfihlo yemininingwane yethu.
Kakade nayo ingasusa ngokuphepha umsebenzisi wesikhashana, kanye nokwenza isipele okwenziwe.
Uma bengakhumbuli igama lesipele, ku-terminal bangasebenza
Futhi siyabona elinye lamafolda ashiwo kufanele kube igama lomsebenzisi elilandelwa ezinye izinombolo nezinhlamvu (njenge-logix.4xVQvCsO) - lokho kuyisipele.
Kepha lesi sinyathelo singemuva kokuqalisa kabusha.
Ngabe ifolda yomsebenzisi omusha ingabethelwa?
Le nqubo ingasetshenziswa nakubasebenzisi abasha, ngakho-ke imiyalo ekhonjiswe lapha iyafana nalokhu, ngoba sisebenzisa i-akhawunti yethu yomsebenzisi ukubethela entsha.
Ukwakha umsebenzisi omusha ngezimvume zomlawuli:
Manje ekugcineni sinikeza iphasiwedi eqinile kuyo:
Siqala kabusha imishini futhi yilokho kuphela.
Ngaphandle kokuningi, leli elinye lamathuluzi i-Ubuntu elisebenzisa ngokwendabuko, kepha njengoba kushiwo kukhona abanye abanemisebenzi ecacisiwe futhi esezingeni eliphakeme, uma wazi noma iyiphi enye indlela yokubethela ifolda yethu, unganqikazi ukuyabelana nathi kumazwana.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Bethela ifolda yakho yasekhaya ku-Ubuntu 18.04